Tukaana Siree Qabuuf Iddoo Banaa Qopheessuu | Let's Beat the Bed Bug!
Tukaana Siree Qabuuf Iddoo Banaa Qopheessuu
Iddoo banaa hambisuun lakkoofsa tukaana siree iddoo tokkottii baay’atanii jiraatanii ni hir’isa. Iddoo banaa hambisuun 100% kan fiixaan ba’e miti, garuu tukaana siree hanga ta’e qabuuf nama gargaara. Wantootni ati tukaana siree akka hin babaldhanne qabuuf gochuu qabdu armaan gaditti tuqamaniiru:
Meeshaa jabaataa ta’e qopheeffadhu. Dhoohaa meeshaa sana keessan iddoo duwwaan akka jiru ilaali. Sana booda tukaanni dhoohaa sana keessan gara meeshaa saatti olseennu.
Naannoo tokko irratti xiyyeefachuu qabda.
Meehsaa san humnaan walitti hin qabin yoo kana ta’uudhaaf baate hanqaaquun isaanii keessaa dhangala’uun lafa guuta.
Tukaana siree ulaa keessan ba’uun jiraachuu ni danda’u. Akka si jilaa hin baaneef tukaana siree erga qabdeen booda dafii keessaa harcaasi.
Yeroo xumurtu, ujummoo banaa sana cufii kaa’i. Erga sanaa booda boorsaa pilaastikaa keessa kaa’I olkaa’i. Boorsan kun immoo goongaa balfaa keessatti gatamuu danda’a.
Boorsan sun ujummoo banaa kana yoo baachuu dadhabeef, iddoo banaa ujummoo sana keessatti akka tukaana siree hin hafneef bishaan hoo’adhaan dhiquu qabda. Yeroo hedduu calaltuun ujummoo kana wajjin kennamu ni jira. Calaltuun kunis dhiqamuu qaba, yyokin immoo jijjiiramuu qaba. Bishaan iddoo elektikini jirutti hin fayyadaminaa.
Ujummoo iddoo duwwaa kana bakka biraatti fayyadamuu barbaadda yoo ta’e, tukaana siree akka si jalaa hin baqanneef sirriitti cuqaali. Sana booda gara galgalaa bani.
Ujummoo banaatti fayyadamuu kee irra deddeebi’uun tukaana sireeittisuufayyadamuu ni dandeessa. Iddoo dura ujummoo banaa kana fayyadamuun tukaana siree itti qabde yaadadhu. Hanqaaquun lafatti dhangala’uun akka wal hin horre. Tukaana siree ga’eessonni iddoo dura itti walhoranitti walkuusu. Iddoo kana irra deebitee sakata’uufii ujummoo iddoo duwwaa kanatti fayyadamuun akka tukaana siree walhin horre taasisa.
Mala keemikaala hin qabnetti fayyadami, fakkenyaaf: miiccuu, hoo’isuu, cabeessuu fi ujummoo iddoo duwwaatti fayyadamuu. Kun immoo humna namaa siif qusachuu danda’a.
Hanaga danda’ametti mana kee salphaa taasisi. Tukaanni siree dhokachuu jaalatu, meeshaa heeduu hanguma kuuste carraan dhokachuu isaaniis baay’ata.
Meeshaalee tukaana sireetiin hin tuttuqamne adda qooduun iddoo banaa keessa olkaa’uun ujummoo banaatti fayyadamuun irra deddeebisuun qulqulleessuu qabda.
Tukaana Siree Qabuuf Iddoo Banaa Qopheessuu.pdf